स्ववियु चुनावमा नेविसंघलाई अग्रता ,कुन क्याम्पसमा कसले जिते ? (सूचीसहित) – Tourism News Portal of Nepal
स्ववियु चुनावमा नेविसंघलाई अग्रता ,कुन क्याम्पसमा कसले जिते ? (सूचीसहित)
काठमाडौं/त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आंगिक तथा सम्बन्धनप्राप्त क्याम्पसमा बुधबार भएको स्ववियु निर्वाचनमा नेपाल विद्यार्थी संघले अग्रता लिएको छ । करिब दुई सय ३० क्याम्पसमा भएको निर्वाचनको अन्तिम मतपरिणामअनुसार एक सय पाँच क्याम्पसमा विजयी हासिल गरेको नेविसंघका महामन्त्री सरोज थापाले दाबी गरेका छन् । त्यस्तै, एमालेनिकट अनेरास्ववियुले ९७ क्याम्पसमा स्ववियु अध्यक्ष जितेको अनेरास्ववियुका सचिव आरसी लामिछानेले जानकारी दिए । माओवादी केन्द्रनिकट अखिल (क्रान्तिकारी) ले ६६ क्याम्पसमा स्ववियु अध्यक्ष जितेको क्रान्तिकारीका प्रवक्ता सुरेन्द्र बस्नेतको भनाइ छ । बुधबारसम्म नेविसंघले ८४, अनेरास्ववियुले ८० र क्रान्तिकारीले ४३ क्याम्पसमा स्ववियु जितेको थियो ।
उपत्यकाका कुन क्याम्पसमा कसले मारे बाजी ?
उपत्यकाका ठूला क्याम्पसमा अखिल क्रान्तिकारीले अग्रता लिएको छ । उसले पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पस, थापाथली इन्जिनियरिङ र सानोठिमी शिक्षा क्याम्पसमा प्यानलै जितेको छ ।
पुल्चोक इन्जिनियरिङ क्याम्पसमा अनेरास्ववियु क्रान्तिकारीका रोशन थापामगर सभापतिमा विजयी भएका छन् । उनले चार सय ९७ मत र अनेरास्ववियुका सुदीप चालीसेले चार सय ३५ मत प्राप्त गरेका छन् ।
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा नेविसंघ र नेक्राविसंघ
भक्तपुर बहुमुखी क्याम्पसमा नेविसंघ र नेक्राविसंघको संयुक्त प्यानल विजयी भएको छ । संयुक्त प्यानलका दिनेश खड्गीले पाँच सय २३ र उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियुका दीपकबहादुर विष्टले तीन सय सात मत ल्याए । त्यस्तै, सचिवमा संयुक्त प्यानलका विवेक लामिछानेले पाँच सय १२ मत प्राप्त गरेका छन् । उनका प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियुका सन्तोष कार्कीले दुई सय ४५ मत प्राप्त गरे । कोषाध्यक्षमा संयुक्त प्यानलकै मिलन गणेजुले चार सय ९९ र उनका प्रतिद्वन्द्वी अनेरास्ववियुकी सुनिता रोकाले दुई सय ४१ मत प्राप्त गरेकी थिइन् । सो क्याम्पसमा सात सदस्य संयुक्त प्यानलबाटै विजयी भएको निर्वाचन अधिकृत शेरसिङ रैखोलाले बताए । उक्त क्याम्पसमा नौ सय ८० मत खसेको थियो ।
जनप्रशासन क्याम्पसमा नेविसंघ
जनप्रशासन क्याम्पसमा नेविसंघका पंकज सुवेदी क्षेत्री सभापतिमा विजयी भएका छन् । उनले एक सय ८७ मत र अनेरास्ववियुका टीकाराम बस्नेतले एक सय ७७ मत प्राप्त गरेका छन् । सचिवमा नेविसंघकै सन्देश आचार्यले दुई सय ५८ र अनेरास्ववियुका सन्तबहादुर तामाङले एक सय १३ मत प्राप्त गरेका छन् । कोषाध्यक्षमा अखिल क्रान्तिकारी (प्रचण्ड) का जगदीश जोशी विजयी भएका छन् । उनले एक सय ९७ मत प्राप्त गरे । अनेरास्ववियुकी शारदा जोशीले एक सय ६० मत प्राप्त गरिन् । पाँचजना सदस्य संयुक्त प्यानलबाटै विजयी भएका छन् । सो क्याम्पसमा नेविसंघ र क्रान्तिकारीले संयुक्त प्यानल दर्ता गरेका थिए ।
महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पस र नर्सिङमा अनेरास्ववियु
महाराजगन्ज मेडिकल क्याम्पसमा अनेरास्ववियुका मिलन गैरे सभापतिमा विजयी भएका छन् । उनले पाँच सय १३ मत र नेविसंघका सन्तोष उपाध्यायले चार सय २२ मत प्राप्त गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फको सचिव पदमा युथ फर इक्वालिटीकी श्वेता महतो विजयी भएकी छन् । उनले चार सय ८३ मत प्राप्त गरेकी छन् । नेविसंघका नरेशप्रसाद जोशीले चार सय २३ मत ल्याए । कोषाध्यक्षमा नेविसंघका केशव आचार्य विजयी भएका छन् । उनले चार सय ७३ मत र युथ फर इक्वालिटीका सञ्जीव शाहले चार सय ५८ मत प्राप्त गरे । सो क्याम्पसमा आठ सदस्य निर्वाचित भएका छन् । सो क्याम्पसमा अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) र युथ फर इक्वालिटीले संयुक्त उम्मेदवारी दर्ता गरेका थिए ।
मेची क्याम्पसमा मतगणना हुन सकेन
झापास्थित मेची क्याम्पसमा एमालेनिकट विद्यार्थी संगठन अनेरास्ववियुको विरोधका कारण मतगणना रोकिएको छ । अनेरास्ववियुले फर्जी मत खसेको आरोप लगाएको छ । अनेरास्ववियु मतगणना छाडेर नाराबाजीका साथ विरोधमा उत्रिएको छ । स्थिति तनावग्रस्त भएपछि बिहीबार मतगणना नभएको र शुक्रबार सबै विद्यार्थीलाई सहमतिमा ल्याएर मतगणना सुरु गर्ने क्याम्पस प्रमुख कमल गुरागाईंले बताए ।
बागबजारस्थित पद्मकन्या क्याम्पसमा स्ववियु चुनाव हुनुपर्ने माग राख्दै नेविसंघका विद्यार्थीले रिले अनशन सुरु गरेका छन् । स्ववियु चुनाव गर्न क्याम्पसमा सहज वातावरण हुँदा पनि क्याम्पस प्रशासनले विभिन्न बहाना बनाएर चुनाव गर्न नचाहेको नेविसंघकी केन्द्रीय सदस्य रमा थापाले आरोप लगाइन् । क्याम्पस प्रशासनले चुनावी वातावरण नबनाएसम्म अनशन जारी राख्ने उनको भनाइ छ । अनशन बस्नेमा नेविसंघ केन्द्रीय सदस्यद्वय कौशिला भट्ट, रमा थापा, पद्मकन्या क्याम्पस एकाइ कोषाध्यक्ष अर्पणा खड्का र नेतृ तेजकला उप्रेती रहेका छन् ।